मुक्तकमैयाका लागि अर्बौं खर्च भयो तर, पुर्नस्थापित भएनन् Setokhari ::. News Portal
शनिबार, साउन १६, २०७८ ११:२४:१६
मुक्तकमैयाका लागि अर्बौं खर्च भयो तर, पुर्नस्थापित भएनन्
दीपक शर्मा 2078-04-03
गुलरिया (बर्दिया) ३ साउन : उमेरले ६ दशक पार गरिसकेका चमारी थारु अझैं पनि मजदुरी गरी खान कहिलेसम्म सकिन्छ यसै भन्न सकिरहेका छैनन् ।
बर्दिया, बाँके, दाङ्घ, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा जमिनदारको घरमा पुस्तौंदेखि कमैयाको रुपमा रहेका कमैयाहरुलाई सरकारले हचुवाका भरमा जमिनदारबाट मुक्त गराएपछि यस्तो समस्या देखिएको हो । जमिनदारबाट मुक्त घोषणासंगै व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर योजनाबद्ध सरकार अघि नबढेपछि यतिबेला मुुक्तकमैयाको अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेकोछ ।
मुक्तकमैया दिवस मनाइरहँदा विगतका वर्षहरुमा धुमधामका साथ मनाइने गरिएपनी केहि वर्षदेखि मुक्तकमैया दिवश मनाउनु त के मुक्त कमैयाको अवस्था के छ ? भन्ने विषयमा कसैलाई चासो नभएको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर–८ मा रहेका मुक्त कमैया आशाराम थारु बताउँछन् ।
उनका अनुसार अहिले आफुहरु बेरोजगार भएर बस्नु परेको बताउँदै कोभिड–१९ का कारण विहान बेलुकाको खाना खान समेत समस्या भइरहेकोछ ।
मुक्तकमैयाका पीडा केलाउँदै जाने हो भने पहाड बन्न सक्छ । तर, पीडा सुनाएर मात्रै आफ्नो दैनिकी नचल्ने भएकाले रोजगारीको लागी जाँदा पनि पहुँच भएकाहरुले प्राथमिकता पाउँदा आफूहरुले पीडा भोग्नुपरेको थारु बताउँछन् ।
उनले भने –‘कुनै सीप तथा जागीर नपाएको पीडाले जीविकोपार्जनमा समस्या मात्र होइन विस्थापित हुने अवस्था आएकोछ ।’
अझ निर्वाचित जनप्रतिनिधी आइसकेको अवस्थामा समेत स्थानीय तहले मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना र व्यवस्थापनमा कुनै चासो नदिएको मुक्तकमैयाहरुको भनाइ रहेकोछ ।
बर्दिया जिल्लामा अझै पनि करिब ७० जना मुक्तकमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । १६ हजार २ सय ६२ कमैया मध्ये ११ हाजार ८ सय ७५ मुक्त कमैयाले घर बनाउन जग्गा पाएका थिए भने बाँकी ४ हजार ३ सय ३७ जनाले मात्र घर बनाउनका लागी रकम पाएका थिए । पुर्नस्थापना हुन बाँकी रहेकाहरुको अवस्था दयनिय रहेको छ ।
२०५७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा रहेका कमैयाहरुलाई जमिनदारबाट मुक्त गराएका थिए ।
आज संयोगले पनि नेपाली काँग्रेसले नै सत्ताको बागडोर समालिरहेको बेला करिब २२ वर्षपछि पुर्व कमैयाहरुमा भने उत्साह देखिएको छैन ।
चमारी थारु उमेरले ६ दशक पार गरिसके पनि सरकारले उपलब्ध गराएको १ कठठ जमिनमा सानो कटेरो बनाएर बस्न बाध्यछन् । उनी जीवविकोपार्जनका लागि मजदुरी गर्न बाध्य छन् ।
थारुका छोरा पनि जीविकोपार्जनाक लागि दैनिक मजदुरी गरिरहेकाछन् । सरकारले जमिनदारबाट कमैयाहरुलाई मुक्त गरेपछि मुक्तकमैयाको व्यवस्थापनका लागी भनेर घर निर्माणका लागी काठ तथा बजार बस्तीमा १० धुरदेखि १ कठ्ठा र गाँउमा ५ कठ्ठासम्म जमिन प्रदान गरिएको छ । तर, त्यसको सहि व्यवस्थापन हुन नसक्दा २०५२ सालमा मुक्त भएका कमैयाहरु पुनः कमैया बस्न बाध्य भएका थिए । भने कति कमैया अझै पनि वास्तविक कमैया भएपनि कमैयाको परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन् ।
अबैध रुपमा बरामद गरिएको काठमा तस्करीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास
गुलरियाका बाल शिक्षकले बुझाए ज्ञापन पत्र
बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका ७० वर्षिय थापालाई बाघले खायो
बर्दियामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ‘भेरोसिल’ लगाउन प्लानको सहकार्य
चैते धानप्रति बाँकेका किसान आकर्षित